फुटबल – My Blog
लिभरपुल (एजेन्सी) – लिभरपुलका फरवार्ड मोहम्मद सलाहलाई युरोपका तीन शक्तिशाली क्लबहरु मध्ये एकले खरिद गर्न सक्ने ‘द सन’ ले जनाएको छ । विश्व फुटबलमा यो सिजनमा सर्वाधिक गोल गर्ने होडमा रहेका सलाहलाई खरिद गर्न बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) २ सय मिलियन पाउण्डको कीर्तिमानी रकम खर्च गर्न तयार हुनसक्ने सनले जनाएको छ ।
सलाह यस सिजन करियरकै उच्च लयमा छन्। उनले यो सिजन ४३ खेलमा क्लब र राष्ट्रिय टोलीमा गरेर ३७ गोल गरिसकेका छन्। रोमाबाट ३६.९ मिलियन पाउण्डमा लिभरपुल आएका सलाहलाई प्रिमियर लिगमा राख्न यर्गन क्लोपले कीर्तिमानी रकम अस्वीकार गर्नु पर्नेछ।
यहि जनवरी ट्रान्सफर विन्डोमा आफ्ना स्टार खेलाडी फिलिप कौटिन्होलाई १ सय ४५ मिलियन पाउण्डमा गुमाएको लिभरपुलले सलाहलाई पनि क्लबमा राख्न नसक्ने खतरा बढेको हो।सलाहलाई ‘इजिप्टसियन मेस्सी’को उपनामले पनि चिनिने गर्दछ । उनले अहिलेसम्म यो सिजन लिग फुटबलमा लियोनल मेस्सी भन्दा ३ गोलले अगाडि छन् ।
लिस्बोन (एजेन्सी) – रियल म्याड्रिडका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ‘२०१७ पोर्चुगल वर्ष खेलाडी’ को उपाधि जितेका छन्। ३३ वर्षे पोर्चुगेली फरवार्ड रोनाल्डोको यो लगातार तेस्रो उपाधि हो।
‘क्विनास डी ओरो’ नामक यो उपाधि तीन वर्ष अगाडी सुरु भएयता तीनै पटक रोनाल्डोले जितेका हुन् । उनले यसपटक म्यानचेस्टर सिटीका बर्नाडो सिल्भा र स्पोर्टिंङका रुई प्याट्रिसियोलाई पछि पार्दै यो उपलब्धि हात पारेका हुन्। प्याट्रिसियोले कुल मतको १८ प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए भने सिल्भाले १७ पाउँदा रोनाल्डोले ६५ प्रतिशत मत पाएका हुन् । प्रशिक्षक, समर्थक र खेलाडीहरुको मतका आधारमा वर्ष खेलाडी चयन गरिन्छ।
पोर्चुगलको राजधानी लिस्बोनमा सम्पन्न समारोहमा यस अवार्ड पाएपछि रोनाल्डोले भने , “यो मेरो मात्र नभएर मेरा सारा सहकर्मीको सफलता हो । २०१७ अविस्मरणीय रह्यो । म यस उपलब्धि मेरा ४ बच्चाहरुलाई समर्पित गर्दछु। ” “तीन महिनामा तीन बच्चाहरु, यो पनि आफैंमा किर्तिमान हो, ” रोनाल्डोले ठट्टा गरे ।
पेरिस (एजेन्सी)– चोटका कारण पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) का सुपरस्टार नेयमार मैदान बाहिर छन् । तर पनि उनी अर्को सिजन रियल म्याड्रिड जाने सम्भावनाको चर्चा भने केहि महिना यता चलिरहेको छ । उनी मैदान बाहिर हुँदा पनि चर्चा रोकिएको छैन ।
तर, पिएसजीका कप्तान थियागो सिल्भाले भने नेयमार तत्काल कुनै क्लबमा नजाने दाबी गरेका छन् । ब्राजिलियन स्टार सिजनको सुरुवातमा बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानी रकम २ सय २२ मिलियन युरोमा पिएसजी पुगेका थिए । उनले पिएसजीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
तर, नेयमार पिएसजीमा सन्तुष्ट नरहेको र पुनः स्पेन फर्कन चाहेको चर्चा चलिरहेको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहँदैको अवस्थामा नेयमार भित्राउन रियललाई पनि सजिलो नहुने चर्चा पनि चल्दै आइरहेको छ ।
पिएसजी पनि नेयमार अन्य क्लबलाई बेच्ने पक्षमा देखिदैन । चोट मुक्त हुनका लागि नेयमार अहिले स्वदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । नेयमारको अनुपस्थितिमा पनि पिएसजीले लिग १ मा उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सिल्भालाई भने नेयमार पिएसजीमै रहनेमा विश्वस्त छन् ।
“नेयमार बस्नेमा म निश्चिन्त छु,” सिल्भाले भने, “उनी अहिले चोटमुक्त हुने क्रममा ब्राजिलमा छन् । मलाई लाग्छ अर्को सिजन पनि उनी पिएसजीमै रहनेछन् ।” रियालमा उनका ब्राजिलियन सहकर्मी मार्सेलो र कासिमेरो रहेकाले रियल आउँदा उनलाई सहज हुने पनि मानिएको छ ।
बार्सिलोना (एजेन्सी)– बार्सिलोनाका सुपर स्टार लियोनल मेस्सीले अर्जेन्जिनाले रसियामा हुने विश्व कप जित्न नसकेमा आफुले सन्यास लिन सक्ने संकेत गरेका छन् । ३० वर्षे सुपर स्टार मेस्सीले क्लबबाट सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेपनि राष्ट्रिय टोलीका लागि भने उनले महत्वपूर्ण उपाधि दिलाउन सकेका छैनन् ।
सन् २०१४ को विश्व कपमा फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना उपाधिबाट विमुख भएको थियो । थप समय सम्म पुगेको विश्व कप फाइनलमा अर्जेन्टिना जर्मनीसँग १–० ले पराजित भएको थियो । त्यति मात्र होइन, मेस्सी सम्मिलित अर्जेन्टिना ३ पटक कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पराजित भइसकेको छ ।
ला कोनिसासँगको अन्र्तवार्ताका क्रममा मेस्सीले भनेका छन्, ‘यदि हामीले रसिया विश्व कप जित्न सकेनौं भने हामीले राष्ट्रिय टोलीबाट अलग हुनु ठिक हुन्छ । हामी त्यस्तो सच्छौं । रसियामा उपाधि जित्ने सपना मैले देखेको छु ।’
विश्व कपको समूह डीमा अर्जेन्टिनाले आइल्यान्ड, क्रोएसिया र नाइजेरियाको सामना गर्नेछ । राष्ट्रिय टोलीबाट १ सय २३ खेल खेलेका मेस्सीले ६१ गोल गरेका छन् ।
नियोम (एजेन्सी) – गए राति बार्सिलोनाले चेल्सीलाई ३-० तथा बायर्न म्युनिखले बेसिक्टासलाई ३-१ ले हराउँदै च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित पारेका छन् ।
यस पटक अन्तिम ८ मा स्पेनबाट सर्वाधिक ३ टोलीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । त्यस्तै इंग्ल्यान्ड र इटालीबाट दुईदुई टोली क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् भने जर्मनीबाट १ टोलीले अन्तिम १६ मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । यस सिजन फ्रान्सबाट कुनै टोलीले अन्तिम ८ मा स्थान बनाउन सकेन । च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलका लागि ड्र शुक्रबार नेपाली समय अनुसार बेलुका ४.४५ बजे हुने छ ।
यस वर्ष क्वाटरफाइनलमा पुग्न सफल टोलीहरु यी हुन्:
१. रियल म्याड्रिड
अन्तिम १६ नतिजा: पिएसजी विरुद्ध समग्रमा ५-२ ले विजयी
अन्तिम १६ नतिजा: पोर्टो विरुद्ध समग्रमा ५-० ले विजयी
अन्तिम १६ नतिजा: टोटनह्याम विरुद्ध समग्रमा ४-३ ले विजयी
४. म्यानचेस्टर सिटी
अन्तिम १६ नतिजा: बासेलविरुद्ध समग्रमा ५-२ ले विजयी
अन्तिम १६ नतिजा: शाक्तार दोनेस्क विरुद्ध समग्रमा २-२, अवे गोलमा विजयी
अन्तिम १६ नतिजा: म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध समग्रमा २-१ ले विजयी
७. बायर्न म्युनिख
अन्तिम १६ नतिजा: बेसिक्टास विरुद्ध समग्रमा ८-१ ले विजयी
अन्तिम १६ नतिजा: चेल्सीविरुद्ध समग्रमा ४-१ ले विजयी